နန်းကြီးသုပ် | Wutyee Food House
i cannt read dont know why?:(
You download zawgyi font here: http://www.alpha.com.mm/blogday/image/IEZawGyiGtalkfont.EXE
yu yu myint says:
thanks nor wutyee
tal tal kaung mae pone bae…i always cook that one as i always have udon at home and i don’t want to eat chicken meat alone so i cook like that and eat but i putalot more onion and tomatoes as i love them yummmy 🙂
haa… ကိုယ်လက်ရာလေးလည်း စားချင်လိုက်တာ.. ရှလွှတ်
Myat Marlar says:
wow! i very like it
You r so welcome par sis
Thanksalot Maa Wutyee. I look every day your website .
Ma wutyee thank you par naw
You r very welcome sis! 🙂
You r welcome bro!
ဟုတ်ကဲ့ မန္တလေးမှာတော့ ဖြန့်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ
sis yay sa nwin makyite loh mahtal yin yaw phyit lar hin sis 🙂
ဟုတ် ရပါတယ်။ ဆနွင်းမထည့်ပဲ သုပ်လို့ရပါတယ်.. လုပ်စားကြည့်ပါ
ကျေးဇူးဘဲ မဝတ်ရည် အိမ်က ကိုကိုက နန်းကြီးသုပ်စားချင်နေတာ အေးက မလုပ်တက်လို့ ဒီနေ့ လုပ်စားဖြစ်တယ် အရမ်းကောင်းတယ် ကျေးဇူးကမ္ဘာနော်
မ၀တ်ရည် ကျေးဇူးပဲ နန်းကြီးသုပ်စားချင်တာ ကြာနေပြီ၊
Ei Phyu Latt' says:
ကျေးဇူးပါ။ နန်းကြီးသုပ် စားချင်နေတာကြာလှပြီ။ အခုမှဘဲ အားရပါးရ စားရတော့တယ်.
Thanks again & May God bless you.
so welcome!! Thanks also
ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ ကြက်ကချင်ချက်စားပြီးပါပြီ နှစ်ခါတောင်ရှိပါပြီ အရမ်ကောင်းပါတယ် ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲသုပ်နည်းလေးပါတင်ပေးပါနော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဝတ်ရည်ရေ
ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ သုပ်နည်းလေးလည်း ကြိုးစားတင်ပေါးပ့မယ်..
Han Tun says:
ခုဒီနေနံနက် လုပ်စားဖြစ်တယ် အရမ်းစားလို့ကောင်းတယ်တဲ့
very glad you like it sis..
Daw San San Wai says:
Yeast ကြောင့်ဖြစ်မယ်။ နောက်တစ်ခါလုပ်ရင် Yeast နည်းနည်းပိုထည့်ပေးပါ။ သို့မဟုတ်ရင် ဒယ်ထဲ ဆီများများ ထည့်ပြီ ဆီပူလာလျှင် ကြော်ပေးပါ။
You are so clever.I admire you very much.
thks sis . မနက်ဖြန် မနက် ဘုန်းကြီးအာရုံဆွမ်းချက်ကပ်ဖို့ ပညာလာဆည်းပူးတာ ^_^
wutyee foodhouse ko bar fonts nae thone tarlae hin nyi ma shi mhar copy kuu pyi pyan thone tar bar mhar ma paw bu phyint nay loe par Thank you bar sister
I use zawgyi font sis 🙂
ညီမရေ နန်းပြားသုပ် လုပ်နည်းလေးပြောပါဉီး